कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टरद्वारा आत्महत्या ! – Himalitimes
कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टरद्वारा आत्महत्या !
२०७७ बैशाख १७ ०९:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको उपचारमा संलग्न एक डाक्टरले आत्महत्या गरेकी छिन् । न्युयोर्कको प्रेस्बिटेरियन एलेन अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर लोर्ना ब्रेनले आत्महत्या गरेकी हुन् । उनी अस्पतालमा आपतकालीन विभागको मेडिकल निर्देशक थिइन् ।
द न्यूयाेर्क टाइम्सकाे अनुसार उनले आफ्नो काम गरिरहेकी अबस्थामा आत्महत्या गरेको जनाएको छ ।’ यद्यपि फिलिपले आफ्नी छोरीमा त्यस्तो कुनै मानसिक रोग नभएको दाबी गरेका छन् । उनले छोरी भर्जिनियामा आफ्नो परिवारसँगै बसेका बेलामा घटना भएको दाबी गरेका छन् ।
फिलिपका अनुसार उनी कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको उपचार गर्दागर्दै आफैं संक्रमित भएकी थिइन् । त्यसपछि करिब डेढ हप्ता घरमै बसेर उपचारपछि उनी अस्पतालमा काममा फर्किएकी थिइन् । तर अस्पतालले उनलाई फेरि घर फिर्ता पठाएइदिएको थियो ।
फिलिपले छोरीसँग अन्तिमपटक कुरा गर्दा निकै फरक देखिएको दाबी गरेका छन् । उनले छोरीले कोभिड–१९ बाट मर्ने बिरामीहरुको कसरी मृत्यु हुँदैछ भन्ने कहानी सुनाउँथिन् । डा.फिलिपले टाइम्ससँग भने, ‘उनी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्दागर्दै निकै अतालिएकी थिइन् ।
उनलाई एक नायकको रुपमा सराहना गर्नुपर्छ ।’ अमेरिकाकै एक अखबारका अनुसार लोर्ना आफ्नो परिवारसँग धेरै नजिक थिइन् । उनलाई स्की र साल्सा नृत्यु मन पर्दथ्यो । उनी हरेक हप्ता बृद्धाआश्रम पनि जाने गर्थिन् ।
न्युयोर्क प्रेस्बिटेरियन एलेन अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.ब्रेन एक हिरो भएको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै प्रहरीले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्र्दै उनलाई हिरोको उपमा दिएको छ । स्थानीय प्रहरी प्रमुख राचेल ब्रेकनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले कोरोना महामारीको फ्रान्टलाईमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
उनीहरु मानसिक र शारीरिक प्रभावबाट अछुतो रहन्नन् । उनीहरुले अघिपछि पनि तनावपूर्ण रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन्, अहिले त झन् कोरोना महामारीले झन् तनाव बढाएको छ ।’
व्यक्ति र पार्टी होइन,दलिय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै देश !